ကျနော်တို့ Ulefone ကျားကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ ငါတို့ကြိုက်ခဲ့တယ်။ Androidsis
ကျနော်တို့ Ulefone ကျားကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ ငါတို့အဲဒါကိုနှစ်သက်တယ်
ဟိုဆေး Alfocea | | မိုဘိုင်း, reviews, Ulefone
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကမင်းအကြောင်းပြောပြတယ် Ulefone ကျား, un စမတ်ဖုန်း အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ၊ ရက်ရက်ရောရောဘက်ထရီထက်ယူရိုတစ်ရာမပြည့်ရ။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်အဲဒါကိုကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့မကြိုးစားခဲ့ဘူး အခုဟုတ်တယ်
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်သည် Ulefone Tiger အသစ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည် ငါ့ခံစားချက်တွေငါထင်ထားတာထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်မရ။ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုမှ၎င်း၏စတင်ချိန်အထိ၊ အရာအားလုံးကိုငါပြောမည်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကသူ့ရဲ့စျေးနှုန်း၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါလိမ့်မယ်။
1 အဆိုပါ Ulefone ကျား unboxing
2 Ulefone ကျား: ပထမ ဦး ဆုံးအာရုံ
အဆိုပါ Ulefone ကျား unboxing
ငါရရှိသောမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် Ulefone ကျား၊ ကောင်းကင်တွင်အနက်ရောင်ရှိပြီး 16 GB သိုလှောင်မှုရှိသည် ပြည်တွင်းနှင့်2GB RAM မှတ်ဉာဏ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံပြခန်းများတွင်သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဤစမတ်ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြင်နှင့်အတွင်း၌ပါဆွဲဆောင်မှုရှိသောအနက်ရောင်အကွက်ထဲတွင် ၀ င်ရောက်လာပြီးဖုန်း၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်ကိုမဖတ်နိုင်ပါ။ ပုံမှန်စတစ်ကာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည် ဥရောပနှင့် IMEI နံပါတ်လက်မှတ်။
သေတ္တာထဲမှာ Ulefone ကျားဘေးကင်းပါတယ်။ ကတ်ထူပြားသည်အလွန်မာကျောပြီးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပြင်၊ စက်ကိရိယာသည်ဖော့ဆို့သို့မဟုတ်အလားတူဘောင်အတွင်းထည့်သွင်းပြီးမည်သည့်နည်းစနစ်မျှမဆိုလှုပ်ရှားမှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ ဒါ့အပြင်သူကလက်တွေ့ကျသောအမည်းရောင်နဲ့တူတဲ့အိတ်တစ်ခုနဲ့ငါ့ဆီရောက်လာတယ်။
အကယ်၍ ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူပါက၎င်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် USB မှ Micro USB ကေဘယ်လ်၊ ဥရောပပုံစံ (အဖြူရောင်နှစ်မျိုးလုံး) ပါ ၀ င်သည့်နံရံအားသွင်းစက်နှင့်ယခင်ဖော်ပြချက်အချို့ပေးထားသောဘရိုရှာသေးသေးလေးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
Ulefone ကျား: ပထမ ဦး ဆုံးအာရုံ
ကောင်းပြီ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်၎င်းအတွင်းသို့ ၀ င်သမျှအားလုံးကိုဆန်းစစ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့တွေ့လိမ့်မည် Ulefone Tiger ဆိုသောစမတ်ဖုန်းသည်ပထမဆုံးအနေဖြင့်၎င်းင်းကိုကောက်ယူစဉ်ကအားကောင်းခြင်းနှင့်အရည်အသွေးဖြစ်သည်.
အလေးချိန် ၁၅၅ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည့်ဘက်ထရီအပါအ ၀ င်၊ အခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့်ဆင်တူသည် Ulefone Tiger ကိုယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့လက်၌ကောင်းသောဒီဇိုင်းရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှု, rounded အနား နှင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု၌ကြီးသောတိကျ။
အသေးစိတ်တစ်ခုမှာပထမမျက်နှာပြင်မှပလပ်စတစ်ကာကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် terminal ကို screen protector ထည့်ပြီးသား ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်း fondle စတင်နိုင်ပါသည်။
ညာဘက်အခြမ်းတွင် on / off နှင့် volume ခလုတ်များ (အလွန်ပါးလွှာပြီးစတိုင်ကျစွာဖြင့်) ရှိသည်။ အပေါ်ဘက်တွင် micro USB connector နှင့် 3,5 mm jack connector တို့ကိုတွေ့ရမည်။ နားကြပ်နှင့်အောက်ခြေ၌မိုက်ကရိုဖုန်းပါ။
မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားရှိပါတယ် 5,5 လက်မ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် HD 1280 x 720 Pixels y Corning Gorilla Glass။ ပုံရိပ်အရည်အသွေးသည်အကြွင်းမဲ့ဖြစ်သည်။ အရောင်များကိုချွန်ထက်တောက်ပကြည့်ရှုပါ.
ထိပ်နားတွင်နားကြပ်နှင့်ကကိုတွေ့ရသည် ရှေ့ကင်မရာ 5.0MP (8MP ထံမှ interpolated); အောက်ခြေတွင်ဂန္ထဝင်ထိတွေ့ခလုတ်သုံးခုရှိသည်။
နောက်ကျောတွင်အဖုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖယ်ရှားရန်ညွှန်ကြားချက်များပါသောကော် (ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်) ကိုရှာဖွေခြင်းအပြင်၊ အဓိကကင်မရာ၊ 219MP Sony IMX8 ကင်မရာ ဗီဒီယိုကို 13p နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (MP 1080 ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်)၊ က flash ကို dual နှင့် လက်ဗွေဖတ်စက်။ ထိုအခါအောက်ခြေမှာ စပီကာ။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင် Ulefone Tiger သည်ပြသူဖြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း; ၎င်း၏ဖန်သားပြင်သည်အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်သည်။ လျှောက်လွှာများအကြားကွဲလွဲမှုသည်သွက်လက်။ အရည်ဖြစ်သည် MT6737 Quad-Core 1,3GHz CPU သည် 2GB RAM နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအင်အားအကြီးဆုံးဖုန်းမဟုတ်သော်လည်းစိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။
နှင့်ရောက်ရှိသည် အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow စံအဖြစ် install လုပ်, 16 GB ကို တစ် ဦး နှင့်အတူချဲ့နိုင်ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု micro SD ကဒ် 128GB အထိရနိုင်သည် y dual SIM ကဒ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးအလုပ်ဟာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့မရောနှောနိုင်ပါ။
အရင်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ operating system ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်သင်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုပြင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်သော Ulefone Tiger အသစ်၏အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များမှာ -
SONY 4200 mAh ဘက်ထရီသည်ဘက်ထရီကို ၂ ရက်နှင့် ၄၈၀ မှ ၅၅၀ နာရီအကြားအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုမိုရှင်းလင်းသောအသံနှင့်အသံကိုထောက်ပံ့ပေးသောအသိဉာဏ်ရှိသောအသံ chipset AWK9 (AW8739) ။
ဆွဲငင်အား, Hall-effect, ထိတွေ့မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာ
ရေဒီယို FM ရေ
အစပိုင်းမှာငါမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Ulefone Tiger သည်သားရေစာအုပ်အဖုံးနှင့် semitransparent အနားများပါ ၀ င်သည်။ ခလုတ်များနှင့် connectors များအားလုံးကိုအထောက်အပံ့နှင့်ကာကွယ်မှုပေးသည်။ terminal ကိုဆူအောင်မွှေပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်သင့်တော်သည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောဒေါင်လိုက် ၀ င်းဒိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြေခံအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးရိုးရိုးလေးအမူအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုရယူစေသည်။
Ulefone ကျားသစ်သည် 16GB ဖြင့်ကောင်းကင်၊ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်ရှမ်ပိန်ရွှေရောင်များရရှိနိုင်သည် ၏စျေးနှုန်းမှာပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု၏ € 100 ထက်လျော့နည်း Aliexpress၊ Gearbest နှင့်အခြားများစွာသောနိုင်ငံတကာရောင်းသူများမှတဆင့်
သုံးသပ်ချက် - ဟိုဆေး Alfocea
Android 7.0 Nougat နဲ့မပါဘူး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ကျနော်တို့ Ulefone ကျားကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ ငါတို့အဲဒါကိုနှစ်သက်တယ်
Google On ယခု Google WiFi ဖြစ်သည်
ယခုသင် MIUI 32 wallpapers ကိုသင်၏ Android တွင် download လုပ်နိုင်သည်